एक्लै बसेका बेला श्रीमतीको याद आउँछ « प्रशासन
हेमन्त मल्ल ठकुरी पूर्वडिआइजी हुन् । भर्खरै अवकास पाएका ठकुरी अपराध अनुसन्धानमा अब्बल प्रहरी अधिकृतका रुपमा चिनिन्छ । अपराध अनुसन्धानमा औलामा गन्न सकिनेमध्ये एकमा पर्ने ठकुरीसंग प्रेम र जीवनबारे प्रशासन डट कमका एस राज उपाध्यायले गरेको कुराकानी ।
यो प्रश्नको उत्तर दिन गाह्रो छ । म प्रकृति र यहाँका सबै प्राणीलाई प्रेम गर्छु । जस्तो : मेरो घरमा दुई कुकुर छन्, तिनको मलाई धेरै माया लाग्छ । घरमा बोटविरुवा पनि रोपेको छु । कसैले रूख काट्यो भने चित्त दुख्छ ।
प्रेम भन्नेबित्तिकै दिमाग कहाँ गएर अडिन्छ ?
मेरो दृष्ट्रिकोणमा परिवारमै गएर ठोकिन्छ नि । तर, आम मान्छेको धारणा भन्नुपर्दा श्रीमती र गर्लफ्रेन्डमा गएर ठोकिन्छ होला जस्तो लाग्छ ।
यहाँको अनुभवमा कतिबेला हुन्छ प्रेम ?
यो त भन्नै सकिँदैन । मेरा लागि यो गाह्रो प्रश्न हो । मेरो विचारमा प्रेम एक्कासी पैदा हुने कुरा हो । कहिले श्रीमतीको झ्वाट्ट याद आउँछ, त्यो उनीप्रतिको प्रेम हो । छोराछोरीमा पनि यस्तै हो । जोप्रति प्रेम हुन्छ, उसैको याद त आउँछ हैन र ?
को संगको प्रेमले बढी सताउँछ ?
म अहिले रिटायर्ड लाइफमा छु । तपाईंले श्रीमतीमा केन्द्रित भएर कुरा गर्नुभयो जस्तो लाग्छ । उनी विदेशमा जागिर गर्छिन् । मेरो उनीसँग प्रायः म्यासेन्जरमा कुरा भइरहन्छ । कहिले उनी गर्छिन् त कहिले म । मलाई लाग्छ, श्रीमान–श्रीमतीमा जहिले पनि माया हुन्छ ।
एक्लै बसेका बेला दिक्क लाग्यो भने श्रीमतीकै याद आउँछ । मलाई लाग्छ सबैलाई यस्तै हुन्छ । तर, मान्छेले ढाट्छ । श्रीमतीसँग दैनिक चार–पाँच पटक कुरा हुन्छ । तैपनि उनलाई मिस गर्छु ।
भनेपछि प्रेम सम्बन्धसंग नै जोडिएर आउँछ हैन त ?
हो, प्रेम सम्बन्धसँग पनि जोडिन्छ । अनि जब आफूलाई अप्ठ्यारो पर्छ तब जिम्मेवारीसँग पनि जोडिन्छ ।
प्रेममा पेशाले र पेशामा प्रेमले कतिको फरक पार्छ ?
धेरै फरक पार्छ । यदि तपाईंको परिवारमा स्ट्रेस छ र त्यो म्यानेज गर्न सकिएन भने कुनै काममा फोकस गर्न सकिदैन । जस्तो : मैले अघि पनि भने, इन्भेटिकेसन एकदम फोकस भएर गरिने काम हो । यसमा त यसले ठूलो असर पार्छ । घरमा रडाको भएपछि अनुसन्धानमा फोकस गर्न सकिन्छ त ? अहँ, सकिँदैन । यसले अफिसको काम पनि हेम्पर हुन्छ । तर घरमा शान्ति छ । मेलमेलाप छ । सौहार्द वातावरण छ भने त्यसले पेशामा थप उर्जा थप्छ जस्तो मलाइ लाग्छ ।
पेशामा हुँदा र नहुँदा प्रेमको अनुभूतिमा केही फरक देख्नुभएको छ ?
फरक छ । पुलिसको जागिर गर्दा परिवारबाट टाढा भइँदो रहेछ । ढिलो घर आउनुपर्ने र बिहानै निस्कनुपर्ने बाध्यता छ । कहिले त परिवारसँग कुरै गर्न पाइँदैन । राति १०–११ बजे आउँदा सबै सुतिसकेका हुन्छन् । बिहान उठेर जाँदा सुतिरहेका हुन्छन् ।
रिटायर्ड भएपछि कन्फ्युज भइँदोरहेछ । ३०–३२ वर्ष जागिर गर्दा जबमा डिपेन्डेन्सी हुँदोरहेछ । यसले गर्दा कन्फिडेन्ट हुँदैन । किनकि स–सानो काममा पनि साथीभाइले नै सहयोग गरेको हुन्छ । पेशामा रहँदा धेरै जसो काम परिवारका सदस्यले नै गरेका हुन्थे । ब्यस्तताका कारण कहिँ कतै केही गर्न सकिरहेको हुँदैनथ्यो तर, अवकासपछि सबै कुरा आफैले गर्नुपर्छ । अर्को कुरा, अवकासपछि रिक्स वेयरिङ क्यापासिटी पनि घट्दो रहेछ । जागिरे भएकाले हामी रिक्स गर्न सक्दैनांै । लिमिटमा खर्चमा डे टु डे धानिरहेकाले त्यो कन्फिडेन्ट हुँदैन । रिटायर्ड भएपछि तपाईंलाई सबैभन्दा बढी सपोर्ट परिवारले गर्ने हो ।
ऊर्जाको स्रोत पनि मानिन्छ प्रेमलाई, यहाँले कतिको महसुस गर्नुभयो ?
हो, जस्तो : तपाईंको श्रीमतीले कचकच गर्नुहुन्छ । त्यो अवस्थामा अनुसन्धान गर्न जानुहुन्छ भने तपाईंलाई ऊर्जा कहाँबाट आउँछ भन्नुस् त ? आउदैन नि तर श्रीमतीले मायाले पठाउँछिन् भने तपाइमा उर्जा भरिएर आउँछ । त्यसैले प्रेम ऊर्जाको स्रोत हो । जुन मैले महसुस गरेको छु ।
श्रीमान् श्रीमतिमा हुने प्रेम कस्तो प्रेम हो ?
प्रेम भनेको अन्डरस्ट्यान्डिङ हो । श्रीमान–श्रीमतीको अन्डरस्ट्यान्डिङ हो । अर्को, साथीभाइसंग पनि प्रेम हुन्छ जस्तोः ऊसँग मेरो प्रेम नै छैन । ऊ मलाई मन पर्दैन भने कसरी काम हुन्छ भन्नुस् त ?
अफिसभित्र काम गर्ने कर्मचारीले तपाईंलाई प्रेम गर्छन् । तर, तपाईंले प्रेम गर्न सक्नुभएन भने एक अर्कामा विश्वास हुँदैन । त्यसैले माया चाहिन्छ, चाहिन्छ । अफिसमा काम गर्दा फ्याम्ली इन्भारमेन्ट क्रेट गर्नैपर्छ । उनले तपाईंलाई दाजुभाइका रूपमा माने र तपाईंले पनि मान्नुभयो भने मात्रै टिम डेभ्लप हुन्छ । मान्छेको समूह जम्मा गरेर मात्रै टिम डेभ्लप हुँदैन । जहाँ प्रेम हुन्छ त्याहाँको माहोल नै व्यग्लै हुन्छ ।
जहाँसम्म सहकर्मी कर्मचारी बिचको प्रेमको कुरा गर्नुभयो, के सबैमा त्यो हुन्छ ?
त्यो हुँदैन । किनभने लिमिटेड मान्छेको मात्रै टिम बन्छ । लिमिटेड मान्छेबीच बनेको टिम मात्रै सक्सेस हुन्छ । कहिलेकाही टिम बनिदिन्छ । एक–अर्कासँग प्रेम छैन भने त्यो टिम सक्सेस हुँदैन । किनकि जवरजस्ती लादिएको हुन्छ ।
एक अर्कामा प्रेम भएन भने सांगठनिक र कामकाजी हिसावमा पर्ने असर त भयो, पारिवारिक र व्यक्तिगत हिसावमा चाहिँ के हुन्छ ?
त्यो पनि गाह्रो हुन्छ । श्रीमान–श्रीमती ‘रथका दुई पाङ्ग्रा’ भन्छन् नि । एक जनाले मलाई भनेको थियो, ‘श्रीमान–श्रीमती रेलका पट्री र बच्चा भनेका स्लिपर हुन् ।’ त्यो त प्रेम भएन नि । त्यसरी कसरी चल्छ भन्नुस् त ? त्यसले गर्दा परिवार बिग्रेका, श्रीमती एकातिर र श्रीमान अर्काेतिर गएका देखिन्छन् । त्यसले घर गेस्ट हाउस भइहाल्यो नि ।
प्रेम सबैका लागि प्यारो नै हुन्छ, तर प्राप्त गर्ने कसरी ?
सबैभन्दा ठूलो त विश्वास हो । जस्तो तपाईं पहिला म कहाँ आउनुभयो । हेडक्वाटरमा भेट्नुभयो, तपाईंले मलाई विश्वास गर्नुभयो । हिजो पनि आउनुभयो । हाम्रो भेट भइराख्छ । हामीबीच विश्वास अनि माया छ ।
अन्त्यमा, भन्न मन लागेको केही छ ?
म पूर्वपुलिस कर्मचारी भएकाले पुलिसलाई नै केही भन्न चाहान्छु । संगठनलाई माया र इन्स्टिट्यूसनलाई इन्स्टिट्यूसनकै रूपमा क्रेट गरौं । संगठन रहे मात्रै परिचय रहन्छ । त्यसकारण आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुस् ।
Tags : पूर्वडिआइजी प्रेम हेमन्त मल्ल ठकुरी